Umthengisi wenqaku lencwadana elingu-A5 ngaphandle kwefowuni uMvelisi kunye noMthengisi | Sheerfond
Umzekelo No. A5-1
umthamo 4000mAh / 5000mAh / 6000mAh / 8000mAh / 10000mAh
1. Le yimveliso yeshishini enobunewunewu, ngakumbi efanelekileyo kubantu beshishini. Yibhegi yokugcina uziphu enokugcina iifowuni eziphathwayo, ukutshaja iintambo, amakhadi eshishini, amakhadi ebhanki, kunye neencwadana zokubhala. Iza nebhanki yamandla kunye netshaja engenazingcingo. Kwimisebenzi yeshishini ngaphandle, kulungile ukuzisa le bag zipper.
2. Le yimveliso yoyilo. Le yimveliso yethu enelungelo elilodwa lomenzi. Ibhanki yamandla ifihliwe. Xa ufuna umsebenzi webhanki yamandla, cinezela iswitshi kwaye ibhanki yamandla iyavela. Xa ungayidingi, cinezela iswitshi. Amandla eselfowuni afihliweyo, kwaye ukutshaja ngaphandle kwamacingo kukwakhiwa kwesikhumba.
Ibhegi yokugcina ishishini, akukho zincwadana, umnini wefowuni ephathekayo, amandla eselfowuni eyakhelweyo kunye netshaja engenazingcingo, ibhegi yefowuni ephathekayo, ibhegi yekhadi, intambo yokutshaja yokugcina, ipeni yokubamba. Iimpawu eziphambili zemveliso zezi:
3. Inomsebenzi wokugcina umnxeba ofihliweyo, onokuguqulwa ube ngumnini wefowuni nanini na ngokusebenzisa ikhonkco leVelcro.
4. Ifanelekile ilogo yesiko, ilungele isipho sokwenza ngokwezifiso, ukuba kukho imfuneko, ilogo inokwenziwa kwiscreen esikhanyayo, esifaneleke ngakumbi kwimisebenzi yokukhuthaza ishishini.
5. Umgangatho wemveliso uzinzile, iimveliso zidlulile i-CE, i-FCC, isatifikethi seROHS, ibhodi yesekethe iyatshisa, izinga lokuguqula liphezulu, ukusebenza kuzinzile kwaye kuthembekile, kwaye imveliso nganye ivavanyiwe i-100%.
Egqithileyo 3in1 iphedi yemouse yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Okulandelayo: Iseti yezipho